JOHN LOVE: Nanome fanampiana ho an’ny mpanao gazety, bénévolats sy ECD ao amin’ny hopitaly be Antsohihy - Journal Madagascar
“Izay kely hananana no ahiratra”. Tontosa ny 13 mey 2020 ny fizarana ireo fanampiana ho an’ny “bénévolats” sy ECD miasa ao amin’ny hopitaly be Antsohihy ireo mpanao gazety miasa ao amin’ity distrika ity. Ny Filoha tale jeneralin’ny Institut de Formation des Paramédicaux Sofia (I.F.P.S), Andrianarison Jean Aimé Botosera na i John Love no nanolotra izany ho fanamarihana ny andro iraisampirenena ho an’ny infirmiera sy fifanomezan-tanana amin’ny fiatrehana ny hamehana ara-pahasalamana. Anisany antony nanaovany izao asa sosialy izao ihany koa ny maha Paramed azy sy amin’ny mpandraharaha azy ao amin’ny faritra Sofia.
Olona 70 no nisitraka io tohana io ka samy nahazo vary dimy kilao, menaka iray litatra, savony miisa 10, arovava ary valopy misy vola izy ireo. “Tsy manam-bola ny tenako fa atao tahaka mason-tsokina ka izay kely ananana no ahiratra. Manampy ireo mpiara-belona ny tenako satria tsy mandray vola fa manao asa an-tsitrapo ireo bénévolats ireo. Anisany miasa mafy ihany koa ny mpanao gazety amin’ity valanaretina coronavirus ity dia mandray anjara amin’ny fanohanana azy ireo ny tenako”, hoy i Andrianarison Jean Aimé Botosera.